सरकारले फेरि देशव्यापी लकडाउनको घोषणा गरेपछि राजधानी छोड्नेहरुको भिड, कहिलेदेखि सुरु हुन्छ लकडाउन ? — Sanchar Kendra
सरकारले फेरि देशव्यापी लकडाउनको घोषणा गरेपछि राजधानी छोड्नेहरुको भिड, कहिलेदेखि सुरु हुन्छ लकडाउन ?
काठमाडाैं । विश्व यतिबेला कोरोना महामारीका कारण आक्रान्त छ । कोरोना संक्रमण कम गर्न गर्न कयौ देशहरुले फेरी अर्को चरणको लकडाउनको घोषणा गरेका छन् ।
फ्रान्समा दोस्रो चरणको देशव्यापी लकडाउन सुरु हुन केही घण्टा बाँकी रहँदा राजधानी पेरिस छाड्नेहरुको भिड बढेको छ । सडकमा व्यापक चाप देखिएको छ। स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूले इल ड फ्रान्स क्षेत्रमा बिहीवार साँझ सात सय किलोमिटरसम्म कारहरूको जाम देखिएको जनाएका छन्।
राष्ट्रपति एम्यानुअल माक्रोँले फ्रान्स ‘कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको दोस्रो लहरबाट व्यापक रूपमा प्रभावित हुने र त्यो पहिलोभन्दा कडा हुनेमा सन्देह नरहेको’ बताएका छन्। फ्रान्समा गत एप्रिल महिनायता अहिले कोरोनाभाइरस सङ्क्रमितको दैनिक रूपमा मृत्यु हुने सङ्ख्या उच्च दरमा पुगेको छ।
२४ वर्षीय एन्नाले एउटा पत्रिकालाई उत्तरी फ्रान्सस्थित आफ्नो अर्को घरमा बस्न जान प्यारिसस्थित अपार्टमेन्ट छाडेको बताएकी छन्। उनले पहिलो लकडाउन प्यारिसमा बिताउन ‘मनोवैज्ञानिक रूपमा कठिन’ भएको तर बेर्नेमा ‘हावा स्वच्छ’ रहेको अनि त्यहाँ आफूले स्वतन्त्र महसुस गर्ने बताइन्।
गत मार्चमा पहिलो पटक लकडाउन लागु गरिँदा पनि यसै गरी ठूलो सङ्ख्यामा मानिसहरू बाहिरिएका थिए। फ्रान्समा हाल कम्तीमा नोभेम्बरभरीका लागि दोस्रो देशव्यापी लकडाउनको घोषणा गरिएको छ। युरोपका थुप्रै मुलुकहरूमा सङ्क्रमण तीव्र रूपमा बढिरहेको छ।
फ्रान्समा अहिले दैनिक करिब ५० हजार नयाँ सङ्क्रमितहरू भेटिने गरेको पछिल्लो विवरणले देखाउँछ। प्यारिसमा सघन उपचारमा प्रयोग हुने ७० प्रतिशत शैय्याहरू सङ्क्रमितहरूले भरिएका छन्। बुधवार राष्ट्रपति माक्रोँले घोषणा गरेका प्रतिबन्धका धेरैजसो व्यवस्थाहरू मार्चमा लगाइए जस्तै नै छन्।
कोरोना भाइरस महामारीः सङ्क्रमणपछि एन्टीबडीमा ‘तीव्र गतिमा ह्रास’
अनुसन्धानकर्ताहरूले कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणपछि मानिसहरूको प्रतिरक्षात्मक एन्टीबडी एकदमै तीव्र गतिमा घटेको पाइएको बताएका छन्। कोषहरूभित्र भाइरसविरुद्ध लड्न शरीरले तयार पार्ने तत्त्‍व एन्टीबडी हाम्रो रोग प्रतिरोधी क्षमताको एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो।
इम्पेरिअल कलेज लन्डनका अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएका मानिसहरूमा जून महिनादेखि सेप्टेम्बर महिनाको बीचमा २६ प्रतिशतले एन्डीबडी घटेको पाइएको छ। रोग प्रतिरोधी क्षमता कम भएको र कोरोनाभाइरसले धेरै पटक सङ्क्रमित बनाउने जोखिम देखिएको उनीहरूले बताएका छन्।
यूकेमा अक्टोबर महिनाको तेस्रो सातातिर कोभिड-१९ का कारण मृत्यु हुने मानिसहरूको सङ्ख्या ६० प्रतिशतले बढेको विवरण राष्ट्रिय तथ्याङ्क निकायले सार्वजनिक गरेकै समयमा पछिल्लो अध्ययनको निष्कर्ष आएको हो।
रिएक्याट-टू नामक अध्ययनका क्रममा साढे तीन लाख मानिसहरू एन्टीबडी परीक्षणमा सामेल भएका थिए। जून महिनाको अन्त्यतिर र जुलाई महिनाको शुरूतिर गरिएको परीक्षणका क्रममा एक हजारमध्ये ६० जनामा एन्टीबडिज पत्ता लगाउन सकिने अवस्थामा देखिएको थियो।
तर सेप्टेम्बर महिनामा गरिएको परीक्षणका क्रममा एक हजारमध्ये ४४ जनामा मात्रै त्यस्तो अवस्था देखियो। यसले गर्मी र शरद यामको बीचमा एक चौथाइभन्दा बढीले एन्टीबडिज घटेको देखाउँछ।
अध्ययनमा सहभागीमध्ये एक प्राध्यापक हेलेन वार्डले भनिन्, “रोग प्रतिरोधी क्षमता एकदमै तीव्र गतिमा घटिरहेको देखिन्छ। पहिलो परीक्षण गरिएको अहिले तीन महिना पुगेको छ र हामीले एन्टीबडिजमा २६ प्रतिशतले कमी आएको देखिरहेका छौँ।”
कोरोना भाइरस नेपाल: दक्षिण एशियाका अन्य देशहरूमा सङ्क्रमण घटिरहँदा नेपालमा किन तीव्र गतिमा बढ्यो
गत वर्ष चीनको वुहान सहरबाट सुरु भएको कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण यति बेला नेपालमा तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ। विशेषतः काठमाण्डू उपत्यकामा सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य रूपमा बढिरहेको अवस्था भए पनि नेपालका लागि अहिलेको अवस्था ‘पिक’ अर्थात् उच्चतम दर हो वा होइन भन्ने विषयमा विज्ञहरू नै पनि निष्कर्षमा पुगेका छैनन्।
विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण फैलने क्रम सीमित अवधिमा व्यापक रूपमा बढ्ने अनि एउटा विन्दुमा पुगेपछि क्रमिक रूपमा घट्ने गरेकाले पनि नेपालमा हालको अवस्था के हो भन्ने बारे कौतुहलता देखिन्छ। के हो त नेपालको अवस्था? दक्षिण एशियामा सङ्क्रमण घटिरहँदा नेपालमा किन तीव्र गतिमा बढिरहेछ त?
“नेपालमा निकै कम सङ्क्रमणका घटना पुष्टि हुँदै कडा लकडाउन लागु भयो जसले गर्दा सङ्क्रमण बढेन। भारतमा प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था खुकुलो पारिँदा नेपालमा पनि खुकुलो पारिएको भए दुई देशको ‘पिक’को समय मिल्न सक्थ्यो,” उनले बीबीसीसँग भने।
उनका अनुसार ब्रिटेन र फ्रान्सजस्ता युरोपेली मुलुकहरूमा पनि प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था खुकुलो पारिएसँगै सङ्क्रमणको दोस्रो लहर देखिएको छ। यता भारतको दिल्ली प्रदेशमा कोरोनाभाइरस विरुद्धको खोप नआउदासम्म विद्यालय बन्द नै रहने भएका छन् ।
खोप नआउदासम्म बालबालिकाहरु विद्यालयमा सुरक्षित हुन नसक्ने भएकाले अहिले नै विद्यालयहरु खोल्न ठीक नहुने निश्कर्ष प्रदेश सरकारले निकालेको हो ।
दिल्ली प्रदेशका उप मुख्यमन्त्री तथा शिक्षा मन्त्री मनिष सिसोडियाले भने, ‘जहिलेसम्म खोप आउदैन त्यहीलेसम्म दिल्लीका विद्यालयहरु बन्द नै रहन्छन् ।’ कोरोनाविरुद्धको खोप नआउदै विद्यालय खोल्नु घातक हुने भएकाले विद्यालय खोल्ने निर्णय गर्न नसकिएको उनले स्पष्ट पारे ।
भारतका कतिपय प्रदेशहरुले विद्यालय खोल्ने निर्णय गरेपनि दिल्ली प्रदेशले भने बन्दलाई अझै कायमै राख्ने निर्णय गरेको छ । तुलनात्मक रुपमा कोरोनाभाइरसबाट बढी प्रभावित प्रदेश भएकाले पनि दिल्ली सरकारले विद्यालय खोल्ने जोखिम नलिएको हो ।
नयाँदिल्लीमा मात्रै अहिलेसम्म कोरोनाभाइरसबाट पाँच लाख ४० हजार ५४१ जना सङ्क्रमित भएका छन् । त्यहाँ आठ हजार ६२१ जनाको मृत्यु भएको छ । दिल्ली प्रदेश भारतमा कोरोनाभाइरसबाट धेरै प्रभावित छ प्रदेश मध्येमा पर्दछ ।